Bill Payment & Recharge,Wallet အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.3 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（8.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Bill Payment & Recharge,Wallet
Oxigen အိမ်မှသင့်အားယူဆောင်လာသည့် Oxigen, အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းမှုပေးသူသည်သင်၏ငွေပေးချေမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေသားမရှိသောငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် Oxigen Wallet ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူသွယ်တန်းပါ။
* ချောမွေ့စွာငွေပေးချေခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ > 'Deals & Offer' အပိုင်းအောက်ရှိသီးသန့် cashback ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေပါ။
* 'My Wallet' အခန်းအောက်ရှိသင်၏လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံး - ငွေပေးချေခြင်း၊ အမှာစာများစသည်တို့ကိုစုစည်းထားပါ။ >
* စာဝှက်ဖြင့်သင်၏ငွေကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်း။ လုံခြုံစွာပေးဆပ်ပါ။
Oxigen Wallet မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အလင်းဖြစ်သည်၊ လျှပ်စီးမြန်။ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး အင်္ဂါရပ်များ
1 ။ ပို့ပါ: အိန္ဒိယရှိမည်သည့်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိမည်သည့်မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဆိုသို့မဟုတ် IMPS သို့မဟုတ် NEFT ကိုအသုံးပြုပြီးအိန္ဒိယကိုလွယ်လင့်တကူ တင်၍ ဘဏ် ၁၇၀ ကျော်သို့ငွေပို့ပါ။
2 ငွေပေးချေခြင်း - သင်၏မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် DTH ငွေဖြည့်ခြင်း / ဒေတာကဒ်ငွေဖြည့်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ၊ ဓာတ်ငွေ့ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ရေငွေတောင်းခံမှုများနှင့်အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းစသည့်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ဖုန်းများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်လက်ကျန်ငွေ / ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ အကြွေးဝယ်ကဒ် / အပိုဘဏ် / UPI တို့ကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်း။
3 လက်ဆောင် - သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့ချစ်ပါလိမ့်မည်တစ်ခုခုလက်ဆောင်ပေးပါ။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းစတိုး၏လက်ဆောင်ကဒ်ကော။ မှန်တယ်! App မှလက်ဆောင်ကဒ်များကို ၀ ယ ်၍ သင်၏သူငယ်ချင်းများစိတ်ကြိုက်စျေးဝယ်နိုင်ခွင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။
4 ASK: ပိုက်ဆံကုန်သွားသလား။ ချွေးမမနေနှင့်! သင်၏ (သို့) သင်၏သူငယ်ချင်း၏မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအပလီကေးရှင်းအတွင်းမှသူငယ်ချင်းများမှငွေများကိုတောင်းယူပါ။
5 စျေးဆိုင်: သင်အလိုရှိသည်နှင့် Oxigen ပိုက်ဆံအိတ်ကို သုံး၍ ငွေပေးချေမှုကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
6 ။ ePaylater - မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာလက်ကျန်ငွေနည်းနေပေမဲ့ငွေပေးချေရမယ်။ !! ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့လစာကုန်သွားပြီ၊ 'pay later' option ကိုသာသုံးပါ။ သင်၏ငွေဖြည့်ခြင်း / ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးဆောင်ပြီးသင်ပြန်ပေးရန် ၁၄ ရက်ရပါမည်။ မိုဘိုင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်စသည်တို့စသည်ဖြင့်ငွေသွင်းခြင်း / အသုံးစရိတ်များအတွက်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုအတွက်မဆို၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။
Honigen ပြီးနောက် Oxigen Wallet သည် eKYC (OTP based KYC) ကိုအက်ပ်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ တရားရုံးချုပ်အမိန့်။ သို့သော် KYC စက္ကူကိုလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားတင်ပြခြင်းအားဖြင့် Oxigen Retail Stores တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ App အနီးရှိ 'Locate Stores' ကိုနှိပ်ပြီး care@oxigenwallet.com သို့ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးပါ။ သင့်အနီးအနားရှိစတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုရှာပါ။
လွယ်ကူသောမိုဘိုင်းငွေသွင်း / ငွေတောင်းခံမှုကိုတွေ့ကြုံနိုင်ရန် Oxigen Wallet Mobile App ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ UPI ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်စျေးဝယ်ခြင်း။ အခက်အခဲမရှိသောငွေလွှဲခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ရာလက်ဆောင်ကဒ်ပြားများစွာကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။ လိုက်နာရန်အကြောင်းများကြောင့် Oxigen Wallet သည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော OS ကိုထောက်ပံ့ခြင်းရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်မေးမြန်းမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကို care@oxigenwallet.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဘာအသစ်လဲ Bill Payment & Recharge,Wallet 9.4